जुन 2, 2018 व्यवस्थापक
युरोप मा भिषा आउटएज Cryptocurrency भुक्तानी को सम्भावित हाइलाइट्स
भुक्तानी प्रविधि सुविधा को एक उच्च स्तर संग विश्वव्यापी उपभोक्ताहरु प्रदान गरेको छ. यदि यो प्रविधि रूपमा विज्ञापन काम गर्दैन, यस परिदृश्य धेरै समस्याग्रस्त हुनेछ. भिषा शुक्रबार दिन को सबै भन्दा लागि युरोप भर प्रमुख अवरूद्ध भोगे. यो वैकल्पिक समाधान को लागि आवश्यकता underlines, नगद र पनि cryptocurrency सहित.
युरोप मा भिसा विफलता
उपभोक्ताहरु र व्यवसायीहरूको युरोप भर शुक्रबार प्रमुख भुक्तानी कठिनाइ थियो. एक भिषा भुक्तानी कार्ड मार्फत लेनदेन गर्न प्रयास जो कोहीले समस्या थियो हुन सक्छ. लेनदेन सीमित वा पूरा गर्न असम्भव थिए. वित्तीय संस्थाहरू पनि नगद वा भुक्तानीको अन्य साधन प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरु सल्लाह. मास्टरकार्ड यो मुद्दा प्रभावित भएको थिएन.
भिषा चाँडै अनलाइन लेनदेन यस सन्दर्भमा कम भोगे गरेको औंल्याए छ. बिन्दु-को-बिक्री लेनदेन बाँकी “हिट र सम्झना” दिन को सबै भन्दा लागि. सानो कारोबारका लागि एक सम्पर्क कार्ड प्रयोग प्रायजसो सम्भाव्य थियो. यो सबै वित्तीय प्रणाली प्राविधिक समस्या छ कसरी कमजोर देखाउँछ.
यस्ता घटनाहरू अक्सर अवसर नतिजा कारण. बेलायत मा विभिन्न एटीएम दिउँसो आफ्नो नगद रिजर्व अप प्रयोग गरेका थिए. जबकि समस्या समाधान भएको थियो, एउटा सरकारी बयान दिएको थिएन. भुक्तानी कार्ड सुविधाको यी भुक्तानी ड्राइव कि जटिल पूर्वाधार ठीक काम गर्दछ भने मात्र लागू. भिषा को लागि, कि मामला हिजो देखि टाढा थियो.
cryptocurrency र नगद आवश्यकता
सबैभन्दा उपभोक्ताहरु अझै पनि नगद यस्तो अवस्थामा ह्यान्डल गर्न उपलब्ध छ. जबकि यस्तो असफलता धेरै दुर्लभ, तिनीहरूले कुनै पनि समयमा हुन सक्छ. यसलाई त्यसैले नगद खपत कहिल्यै पूर्ण कम गरिने धेरै असम्भाव्य छ. यो अन्तिम दुर्घटना बाट न्याय, कि शायद सबै भन्दा राम्रो छ.
साथै, को भिषा मुद्दा भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यम पनि आवश्यक छ भनेर देखाउँछ. भुक्तानी कार्ड र नगद विपरीत, cryptocurrencies यस्ता समयमा दिन बचत गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो volatility बावजुद, धेरै भुक्तानी प्रोसेसर अस्थायी मूल्य उतार चढाव बिना cryptocurrency लेनदेन सम्हाल्न अवस्थित.
उपभोक्ताहरु र व्यवसायीहरूको यी विकल्प ध्यान गर्न आवश्यक छ. यसलाई हात मा नगद एक स्थिर आपूर्ति राख्न राम्रो तरिका हो, तर यो अझै पनि एटीएम देखि फिर्ता गर्न उपयुक्त भुक्तानी कार्ड चाहिन्छ. Cryptocurrencies एक विकल्प हो, आज हुनत उनि केहि रिटेलर द्वारा मात्र स्वीकृत छन्. यस्तो समस्या पछि काम ढिलो परिवर्तन गर्न सकेन बरु.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 02.06.2018
$131एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
Huobi गुप्त विनिमय ब्राजील विस्तार योजना
Huobi, एक प्रमुख cryptocurrency विनिमय मूल चीन देखि, ब्राजिलमा दोकान अप सेट छ.
Huobi समूह बाट प्रतिनिधि ब्राजील को बजार प्रवेश गर्न कम्पनीको मनसाय पुष्टि गरेको.
प्रयास वैश्विक विस्तार को लागि Huobi गरेको योजना अर्को चरण निशान.
Blockchain समाचार 22 जनवरी 2018
दक्षिण कोरिया consum ...
टीडी Ameritrade Plante ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 01.06.2018
अर्को पोस्ट:Ethereum वालेट ImToken छ $ 35जम्मा मा बी, धेरै 99% अमेरिकी बैंकहरू को